Ukugoqwa Kwe-Enbridge Up Kalamazoo River Spill Ukuhlanza Nokubuyiselwa Komzimba
ICOMSTOCK TOWNSHIP, MI - Leli yihlobo lokugcina uMfula iKalamazoo ozoba yindawo lapho kuzokwakhiwa khona izinto ezinzima, njengoba i-Enbridge Inc. ihlanza ukungcola lapho kuvuza khona amapayipi okwathumela amalitha alinganiselwa ku-800,000 kawoyela ongahluziwe eTalmadge Creek nasemfuleni.
Cishe sekuyiminyaka emine kamuva selokhu kwatholakala i-spill ngoJulayi 26, i-2010 eduzane neMarshall, inkampani yamapayipi aseCanada isonga okuhlanzwa.
Isikhulu seComstock Township Supervisor u-Ann Nieuwenhuis uthe umsebenzi waselokishini lakhe elisempumalanga yeKalamazoo County uwenze kahle kakhulu umbono womphakathi futhi ngokusobala ngaphandle kokushaya.
"Njalo emasontweni amabili (i-US Environmental Protection Agency) ihlela umhlangano wababambiqhaza eMarshall engiwuthamela mathupha noma ngocingo," kusho uNieuwenhuis. “Emasontweni amabili edlule ngicele ukuya kule ngosi. Umqondo wami ukuthi sinenguqulo yeCadillac (yokusebenza dredging). Usonkontileka ongusonkontileka wabeka umcabango omkhulu ekutheni angayisetha kanjani, ”kusho yena, okuholele ekusebenzeni ngokuthula, ngendlela efanele, ephephile.
"Babheke umugqa wesikhathi esibabekele sona, futhi nginethemba lokuthi umhlaba uzobuyiselwa esimweni owawunaso (ngaphambi kokuchitheka) ngasekupheleni kukaNovemba, okwakuyisivumelwano senkontileka," kusho uNieuwenhuis.
Umkhulumeli we-Enbridge uJason Manshum uthe uma sekuqediwe ukungcola umhlaba ongcolile eMorrow Lake delta, kulindeleke ukuthi kube maphakathi nehlobo kuze kube sekupheleni kwehlobo, umsebenzi njengoba uchaziwe ngaphansi komyalo wangoMashi 2013 we-EPA uzobe usuphelile. Ukuvuselelwa komfula iWordbank kuzoqhubeka ngokuwa komgwaqo wonke wamamayela we-35 e-calhoun naseKalamazoo obekungaphansi kokuchitheka kokuchitheka, kusho yena.
Selokhu kukhishwe uwoyela ongahluziwe osindayo ohlelweni lwamapayipi e-Enbridge, ohulumeni kanye nohulumeni babambisene ekubhekeni ukunqandwa nokususwa kukawoyela endaweni ezungezile.
"Siletha inhlabathi kanye nezitshalo zomdabu kanye nezihlahla ukwenza indawo enhle eluhlaza njengokubukeka sengathi bekungakaze kube nokuchitheka lapho," kusho uManshum, "ngokwesivumelwano sethu noMnyango Wezokulingana Kwezemvelo eMichigan kanye UMnyango Wezemvelo waseMichigan). ”
Ngemuva kwalokho, ngaphandle kokuqapha ngezikhathi ezithile kwemvelo, umsebenzi wakwa-Enbridge uzophela, kusho uManshum. "Uma ngabe kunesidingo sokuthi kubhekwane nendawo ethile (sizobuya), kodwa ngokwazi kwethu, sisesigabeni sokugcina."
Le nkampani ibikade inethemba lokuthi izokwenziwa ngomshini wokukhipha amandla eMorrow Lake ngasekupheleni kwe-2013, kodwa ibe nenkinga yokuthola isiza esamukelekayo sephedi yasesitolo ukuze ibambe okwesikhashana lokho ngaphambi kokuba iloli. NgoFebhuwari, i-Enbridge yamukelwa yiComfort Township Planning Commission ukuthi ibeke indawo yokuhlala e-Benteler Industries, ehlala enyakatho yechibi ku-East Michigan Avenue.
Lokho kuvunywa kwakuxhomekeke e-Enbridge kusetshenziswa umzila wamaloli ovimbele ukuhlangana kwendlela eMike Avenue Avenue naseKing Highway, kuze kufike amaloli e-200 ngosuku ukuthutha okungcolile kusuka esizeni kuya ekugcwalisweni komhlaba okugunyaziwe. Okunye futhi isimo ukuthi i-Enbridge isungule abagadi bokulawula ikhwalithi yomoya kuFleetwood Neighborhood eseduze.
Selokhu kwaqala umsebenzi wokumba kabusha, uNieuwenhuis uthe, “kukabili kuphela sathola izingcingo - ngo-Ephreli 22 abanye abantu bakhala ngephunga likadizili. Amaloli amaningi abengena ephuma ngoba lokho bekungukuqala kwemikhawulo yokususwa kwesisindo ngosuku lokuqala. ”
Kwesinye futhi isikhathi umuntu abizwa ekhononda ngephunga, kusho yena.
Umsebenzi owenziwe kuleli hlobo awubonakali komakhelwane beFleetwood, kufihlwe insimbi yodaka, kubhekwe nomoya nomsindo ukuze kuqinisekiswe lutho olungena ngaphakathi kweWenke softball complex eMfu Oaks Park.
Amaloli akhombise ukulandela izindlela zawo ezigunyaziwe, kusho uNieuwenhuis. “Kuze kube manje, kuhle,” kusho yena.
Ukhuphuka eduze kwendawo okuqhume kuyo amapayipi, lapho kuqale khona umsebenzi wokuhlanza kanye neminye imisebenzi, umbuso ubamba iqhaza kakhulu ekubhekeni nokubuyiselwa komfula, kusho uMichelle DeLong, oyiNhloko yoMnyango Wezamanzi we-Enbridge. Lokho kufaka phakathi izinhlangothi zesiteshi, kufakwa izingodo ezinesakhiwo sezimpande ezinamathiselwe ukudala indawo yezinhlanzi, kwakhiwa amachibi amanzana anezindawo ezinamatshe angajulile futhi kufakwa ibhulashi eceleni komfula. Ukutshala kuzokwenziwa ngasekupheleni kwehlobo futhi kuwa.
Ngaphezu kwalokho, izikhulu zombuso "zisabheka futhi zizosebenzisana ne-Enbridge njengoba i-EPA ishiya indawo lapho kwenziwa kabusha," kusho uDeLong.
"Ngesinye isikhathi, lapho i-US EPA ishiya lo msebenzi, sizoqala uhlelo lwethu lokuqapha nokuhlola lwesikhathi eside noMnyango Wezobulungiswa Kwezemvelo eMichigan," esho.
USteve Hamilton, uMongameli woMkhandlu WaseKalamazoo River Watershed Council, uthe umqondo wakhe ngokuhambela imihlangano yababambiqhaza nokuhambela umcimbi wokudonswa kweMorrow Lake emasontweni ambalwa edlule ukuthi ukusatshalaliswa kokugcina kuhamba kahle kakhulu.
"U-Enbridge nosonkontileka babo, kanye ne-EPA kanye ne-DEQ, bafunde okuningi kulwazi lwangaphambilini lokumba kwenye indawo ohlelweni lomfula, futhi basungule uhlelo olwakhiwe kahle kakhulu lwezimo zendawo," esho. “Futhi kubonakala kucace kimina ukuthi abakhokhelanga mali ukuphatha izinto ngendlela efanele futhi ngokuphepha, nokuqinisekisa ukuthi ukukhishwa komoya akuyona inkinga. Ngakho-ke, akukho zikhalazo ngombono wami. ”